Fodiamandry : niaiky avokoa ny rehetra fa miavaka ny Pr Zafy | NewsMada
Fodiamandry : niaiky avokoa ny rehetra fa miavaka ny Pr Zafy
Naneho ny heviny ireo mpanao politika sy mpitantana sasany eto amin’ny firenena. Resy lahatra ny rehetra fa very olomanga ny firenena. Lavo ny andrarezina, ”Rain’ny demokrasia” sy ny fampihavanam-pirenena.
Ny filoha teo aloha, ny amiraly Ratsiraka Didier: “Manjombona ny vodilanitra malagasy rehefa olon-dehibe sy manan-kaja toy izao no maty lasan’Andriamanitra. Efa nifankahalala hatramin’ny ela izahay, fony mbola mpianatra tany andafy… Nodimandry izy izao, lasa andry niankinana izany ny firenena malagasy. Ataoko fa ny firenena manontolo no misaona amin’izao fotoana izao.”
Ny filohan’ny HCC, teo aloha, Ratsirahonana Lala Norbert: “Anisan’ny filoham-panjakana nanana fahendrena izy, raha tsy voalohany dia faharoa: ohatra, ny fanekeny ny fanapahan-kevitry ny Antenimierampirenena sy ny HCC tamin’ny fampiatoana azy. Olona tia fahamarinana izy, manaja ny fahaleovantenan’ny fitsarana tamin’izany. Mpitolona mafana fo amin’izay heveriny ho tsy rariny na tsy manara-dalàna na mety hitera-pahavoazana ho an’ny firenena izy. Very olomanga tanteraka ny firenena.”
Ny minisitry ny Fiarovam-pirenena teo aloha, ny Jly Ramakavelo Désiré: “Filoham-pirenena tena nikatsaka ny soa ho an’ny vahoaka ary tena akaiky ny fon’ny vahoaka izy, na nesoesoana tamin’ny hoe “Mada Raid” aza. Anisan’ny filoham-pirenena nitondra teo izy, tsy mba nisy niteny hoe nanankarena tampoka. Na hoe nanao trano any ivelany, na nanana volabe amin’ny banky any ivelany… Nampiavaka azy izay. Nipetraka tamin’ny naha raiamandreny azy hatrany izy.”
Ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky Jean-Omer: “Olona tia tanindrazana izy, ary nandala hatrany ny demokrasia. Anisan’ny notandroviny ny tombontsoa iombonana, fa tsy ny tombontsoa manokana. Tsy mba nangoron-karena izy tamin’ny nandalovany teo amin’ny fitondrana, fa mitsinjo hatrany vahoaka. Zava-dehibe taminy ny fampihavanam-pirenena, ny fijerena hatrany ny fampandrosoana ho an’ny rehetra.”
Ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré: “Tamin’ny nandrafetana ny lalàna momba ny fampihavanana malagasy no tena nahafantarako azy fa olona tia fihavanana izy: tena atao hoe raiamandrenin’ny fihavanana. Fantatsika fa izy no nitarika ny hoe fampihavanam-pirenena. Tena zava-dehibe izay fihavanana izay, ary tsy azo vidiam-bola izany amintsika Malagasy: tena zava-masina.”
Ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao : ”Maneho fiaraha-miory noho ny fodiamandrin’ny filoha teo aloha, ny Pr Zafy Albert, ny fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo sy ny mpiara-miasa aminy rehetra, ary ny tanànan’Antananarivo sy ny vahoaka manontolo eto an-dRenivohitra. Mirary ihany koa raha mirary ny fihononana feno ho an’ny fianakaviany”.
Nangonin’i R. Nd. Sy Synèse R.